PSJTV | एउटै खोलामा ५० मिटर दुरीमा दुइटा पुल!
एउटै खोलामा ५० मिटर दुरीमा दुइटा पुल!
रोल्पाको माडीखोलामा नजिकै दुईवटा पुल देख्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। धेरै नदी र खोलामा पुल नभएका बेला एकै ठाउँमा दुईवटा पुल देख्दा आश्चर्य लाग्नु स्वभाविक हो। तर करिब ५० मिटर दूरी नजिक पक्की र बेलीब्रीज देखिने अवस्था आउनुमा लामो कथा छ।
एक दशकदेखि यो खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र थियो। दुईवटा पिलर ठड्याएर लामा धमे्रन्द्र जेभी कन्ट्रक्सनका ठेकेदार बसन्त डिसीले पुल अलपत्र छाडेका खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।
प्यूठान चकचकेस्थित सडक डिभिजन कार्यालय र निर्माण कम्पनीबीच २०६६ असार १९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अवधि सकिन लागेका बेला पुल निर्माण गर्न झुल्किएका ठेकेदारले डिजाइन इस्टिमेट गलत भएको भन्दै काम रोके। पुनः डिजाइन इस्टिमेट गरेर ठेक्का सम्झौता गरेपछि दुईवटा पिलर ठड्याएर ठेकेदार बेपत्ता भए।
पुल अलपत्र पारेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर पुनः टेन्डर आह्वान गर्‍यो। २०७५ असार ३० गते सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनी एसिट टिक÷राज जेभीसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता भयो। ३ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको पुल १७ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि थियो।
तर एक दशकसम्म अलपत्र परेको पुल ११ महिनामै सम्पन्न भयो। निर्माण व्यवसायी राजवीर सम्झौता अवधिभन्दा पहिले नै पुल सम्पन्न गरे।
‘जिल्लाकै सामरिक महत्वको पुल भएकाले अहोरात्र खटिएर निर्माण सम्पन्न गरेँ’ उनले भने, ‘समयमै पुल बनेपछि सबै स्थानीय खुसी छन्। धेरैले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। पुल नहुँदा पश्चिमी रोल्पाका आधा दर्जन बढी स्थानीय तह र छिमेकी जिल्ला दाङ, सल्यान, रुकुम आवतजावतमा निकै सास्ती हुने गरेको थियो। सदरमुकाम लिबाङसँग जोडिने पुल नबन्दा वर्षात्का बेला यातायातका साधन चल्न सक्दैनथे। हिउँदको समयमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले खोलामा अस्थायी काठेपुल निर्माण गरेर यातायात सञ्चालन गरिरहेको थियो।
विकल्पमा बेली ब्रीज
अस्थायी काठेपुल निर्माणमा बर्सेनि लाखौं रकम खर्च हुन थालेपछि विकल्पमा बेलीब्रीजको निर्माण गरिएको हो। २०७२ सालमा यहाँ बेलीब्रीज राखिएको ५ नम्बर प्रदेश सांसद दिपेन्द्रकुमार पुन बताउँछन्। पुल अलपत्र रहेपछि सर्वसाधारणले नेतालाई ठेकेदारबाट पैसा खाएर पुल नबनाएको भन्दै गाली गर्न थालेपछि विकल्पमा बेलीब्रीज बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
ठेक्का तोड्न र नयाँ सम्झौता गरी पुल बनाउन समय धेरै लाग्ने भएपछि वैकल्पिक रुपमा बेलीब्रीज निर्माण गरिएको थियो। ७३ दशमलव ४० मिटर लम्बाई र तीनवटा स्पाम रहेको पक्की पुल निर्माण भएपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। ‘ठेकेदारले पुल अलपत्र पारेपछि हामीले खुवै गाली खानुपर्‍यो’ उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी इमान्दार भएर मात्र सरकार सफल हुनसक्छ।’ ठेकेदारकै कारण बर्सेनि करोडौंका भौतिक पूर्वाधार निर्माण अधुरा हुँदै आएको मन्त्री पुन बताउँछन्।
एक दशकदेखि शिलान्यास गरेर अलपत्र परेको पुल सम्पन्न भएपछि पनि मन्त्री पुनले नै पुनः उद्घाटन गरे। पक्की पुल निर्माणमा खड्क दल गणका नेपाली सेनाकोसमेत ठूलो सहयोग रह्यो। पुलको पखेरामा रहेको कडा चट्टान कटान गर्न नेपाली सेनाले सहयोग गरेको थियो। पक्की पुल बनेपछि अब बेलीब्रीज कहाँ लैजाने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला भित्रका अन्य नदी र खोलामा जडान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले लिबाङ–बाजबाङ सडक खण्डमा बेलीब्रीज आवश्यक रहेको बताए। कतिपयले नगरपालिकाकै ९ नम्बर वडा ह्वामा जोड्ने धाङ्सी खोलामा जडान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
काठमाडौं : ट्रकले ठक्कर दिँदा बालिकाको मृत्यु भएपछि अशान्त बनेको कोहलपुरमा अहिले निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको छ । आज (आइतबार) बिहान कोहलपुर–नेपालगञ्ज सडकखण्ड अन्तर्गत हाइस्कुल चोकमा ट्रकको ठक्करबाट त्रिभुवन उच्च माध्यामिक ...